Kratom (ဘိန်းစာပင်) ဟာ မူးယစ်ဆေးလား? ဆေးဝါးဓာတ်စာလား? - DVB
Kratom ကို မြန်မာလို ဘိန်းစာပင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထိုင်းဘာသာနဲ့တော့ ကာရ်တုန်မ် လို့ အသံထွက် ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ သိပ္ပံအခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် Mitragyna Speciosa လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ကာ Rubiaceae ဆိုတဲ့ အပင်မျိုးရင်းကနေ ဆင်းသက်လာပါတယ်။ နှော၊ မအူတို့လို မျိုးစိတ်မျိုးဖြစ်သလို ကော်ဖီပင်နဲ့လည်း မျိုးနွယ်အတူတူပါပဲ။ ဒီအပင်မျိုးဟာ အရှေ့တောင်အာရှမျိုးရင်း အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ပါပူအာနယူးဂီနီနဲ့ မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတွေမှာ ပေါက်ရောက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တနင်္သာရီဘက်က လူတွေဆို ပိုသိနိုင်ပါတယ်။
မျိုးရင်းဒေသတွေမှာတော့ အဆိုပါ Kratom ကို တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးချတာမျိုးက ရှေးယခင်ကတည်းက ရှိခဲ့ပါတယ်။ Kratom ရဲ့ အရွက်ကို စိတ်ငြိမ်ဆေးအဖြစ် အသုံးချကြတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုတွေနဲ့ အစာချေစနစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဖျားနာဝေဒနာတွေကို ကုသနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘိန်းစာပင်ဟာ ဘိန်း၊ ဆေးခြောက်တို့လိုပဲ စွဲလမ်းမူးယစ်စေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိနဲ့ စိတ်ကြွစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ၂ မျိုးစလုံးပိုင်ဆိုင်နေတာမို့ မတော်လောဘနဲ့ အသုံးချမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။
Kratom အရွက်ဟာ အစိမ်းရင့်ရောင် အရွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ မာလကာရွက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ အဆိုပါ အရွက်ကို အခြောက်ခံ၊ ထောင်းပြီး အသုံးပြုကြတာများပြီးတော့ ဆေးခဲ၊ ဆေးတောင့်ပုံစံတွေလည်း ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ အမေရိကမှာတော့ လက်ဖက်ခြောက်လို ရေနွေးထဲ ခတ်သောက်တာမျိုးလည်း သုံးကြပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားမှာတော့ Kratom ဟာ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ အကြားမှာ ရေပန်းစားပါတယ်။ အပင်ပန်းခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အရွက်ကိုဝါးစားကြပါတယ်။ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီးတော့ အလုပ်ပိုလုပ်လာနိုင်တာမျိုး၊ အလုပ်ကြမ်းဒါဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားများနာကျင်မှုတွေကို လျော့ပါးစေတာမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ ဆေးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာတွေကို လျော့ချဖို့ ဒီအရွက်နဲ့ အစားထိုးအဖြစ် ကျွေးကြလေ့ရှိပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ Kratom နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကျကျလေ့လာချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ ဆေးဝါးအတွက် အသုံးပြုဖို့လည်း တရားဝင်ထောက်ခံချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်အထိ Kratom ကို ဆေးဝါးကုသရာမှာ အသုံးပြုမှုတွေကလည်း ဒေသအလိုက် ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဝါးတွေမှာ အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအကြားထဲ အငြင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Kratom မှာပါဝင်တဲ့ Alkaloids ပမာဏဟာ ဘိန်းနဲ့ Hallucinogenic Mushrooms တွေနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပမာဏမျိုးဖြစ်တာမို့ တစ်ချို့က မူးယစ်ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: Kratom (ဘိန်းစာပင်) ဟာဆေးဝါးဓာတ်စာလား?မူးယစ်ဆေးလား?
Previous story စပါးနောက်ခံလူ ဒယ်နီရို့စ်ကို ဘုန်းမောက်နှင့်ဝက်ဖို့ဒ် ခေါ်ယူရန် ကြိုးစား
Next story မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ကြက်၊ ဘဲဈေးကို နေရာတခု သီးသန့်စီမံပေးရန် ဈေးသာယာရေး တောင်းဆို